ဒီအဆင်းလှသောမိန်းမ 70 နှစ်ပေါင်းထံမှသကြားမပယ်မရှားခဲ့ပါဘူးသူကို 28 နှစ်ပေါင်းသူ့ခန္ဓာကိုယ်၏ဓါတ်ပုံများကိုထုတ်ဖော်ပြသ - နောက်ထပ်ကျန်းမာရေး MAG - Tele RELAY တစ်ခု
မူလစာမျက်နှာ » အကြံပြုချက်များ နောက်ထပ်ကျန်းမာရေး MAG - သူ့ခန္ဓာကိုယ်၏ဓါတ်ပုံများကိုထုတ်ဖော်ပြသ 70 နှစ်ပေါင်းထံမှသကြားမပယ်မရှားခဲ့ပါဘူးသူကို "ဤလှပသောအမျိုးသမီးတစ်ဦး 28 နှစ်ပေါင်း
Tele RELAY တစ်ခု 15 ခုနှစ်ဧပြီလ 2019
ကြိုဆို / Psycho & လိင် /
70 နှစ်ပေါင်းထံမှသကြားမပယ်မရှားခဲ့ပါဘူးသူကိုဤအဆင်းလှသောမိန်းမ 28 နှစ်ပေါင်းသူ့ခန္ဓာကိုယ်၏ဓါတ်ပုံများကိုထုတ်ဖော်ပြသ
De nombreuses personnes ont fait l’expérience d’éliminer le sucre raffiné de leur alimentation et ont témoigné d’une grande transformation dans leur corps, devenu plus sain. Le cas d’une dame âgée de 70 ans relayé par လက်ရှိအမျိုးသမီးတစ်ဦး ကျွန်တော်တို့ကိုသကြားပိတ်၏အံ့သြဖွယ်သက်ရောက်မှု၏အသကျရှငျဥပမာပြသထားတယ်။
Carolyn Hartz သူမကမတိုင်မီစွဲခဲ့သောမှအစစ်အမှန်သကြားစားသုံးခြင်းရပ်တန့်လုနီးပါး 30 နှစ်ပေါင်းရှိပါတယ်။ က 70 နှစ်ငယ်ရှိသည်ဖို့ပုံရသည်တစ်ဦးက 20 နှစ်ပေါင်း။ ယနေ့ကမာနထောင်လွှားလျက်မိမိ Sculpt ခန္ဓာကိုယ်ဖော်ပြပေးကတဦးတည်းမဟုတ်ပါဘူးကတည်းကသူမ, ရှုပ်ထွေးသောခြင်းမရှိဘဲ, ကမ်းခြေပေါ်ဝတ်ဆင်!
Carolyn လျှို့ဝှက်ချက်ရိုးရှင်းတဲ့ဖြစ်ပါသည်: အဘယ်သူမျှမ သကြား မိမိအအစားအသောက်များတွင်ပါ။ ဒီလိုလုပ်ဖို့ပထမဦးဆုံးအခက်ခဲမှာပုံရသည်, သို့သော်သူမ၏အဆိုအရ, သင်လိုအပ်သမျှအလိုတော်ရှိ၏နှင့်ဖြစ်နိုင်သမျှဖြစ်လာသမျှကိုရန်လိုအပ်သောခြေလှမ်းများ ယူ. , ထိုသို့ပင် 50 နှစ်ပေါင်း၏အသက်အရွယ်မှာပဏာမယူသိပ်နောက်ကျဘယ်တော့မှဖြစ်ပါတယ်။ သူမသည်ကဇီဝြဖစ်အသက်အရွယ်နှင့်အတူနှေးကွေးကြောင်းရှင်းရှင်းလင်းလင်းကြောင်းဝန်ခံသည်, သို့သော်လူတစ်ဦးထိန်းချုပ်မှုကြာနှင့်သင့်လျော်သောအစားအစာကိုရွေးချယ်ရာတွင်နှင့်၎င်း၏ဝေမျှ၏အရွယ်အစားလျှော့ချဖို့သေချာနေဖြင့်သင့်ခန္ဓာကိုယ်အဘို့အညာဘက်ရွေးချယ်မှုမှန်ကန်စေသည်လျှင်, သူမ အခက်အခဲမရှိဘဲအောင်မြင်။
နောက်ထပ်သက်ဆိုင်ရာအကြံဉာဏ်ကို Carolyn အလေးချိန်ရဖို့နဲ့အိုမင်းတဲ့ဖြစ်စဉ်ကိုနှေးကွေးရန်ချိုသောနှင့်လည်းရွှင်လန်းသောသဘောထားထားရန်မဟုတ်သကဲ့သို့တစ်ဦးချင်းစီကိုက်ကိုမြည်းစမ်းခြင်းဖြည်းဖြည်းစားရန်ဖြစ်ပါသည်။ ကနံနက်ယံ၌ပရိုတိန်းစားသုံးခြင်းသေချာပြီးမှေးကွိုအိပ်စက်ခြင်းရှိသည်နှင့်အထူးသဖြင့်အပေါက်ခုံဖိနပ်သောသူအပေါင်းတို့သည်အညစ်အကြေးများ၏မျက်နှာအသားအရေကိုဖယ်ရှားပစ်ရန်အိပ်ရာမသွားမီညမှာမိတ်ကပ်ဖယ်ရှားပစ်ရန်သကဲ့သို့။
သူမသည်နောက်ဆုံးတော့သည်သူ၏ moisturize သေချာ အသားအရေ ဒါကြောင့်နေ့ကိုတစ်လျှောက်လုံးတစ်ဦးတောက်ပအသားအရေနှင့်အတူရဲအောင်နံနက်နှင့်ညနေပိုင်း။
သို့သော် Carolyn များအတွက်အရေးအပါဆုံးကရှိရာသို့အလျင်အမြန်မျှော်မှန်းထားသည်ထက်ပျေါလှငျနဲ့အရေးအကြောင်းတွေ dehydrates အဖြစ်က၎င်း၏နေရောင်မျက်နှာအသားအရေကိုထိန်းသိမ်းဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ အပန်းဖြေများကိုခန္ဓာကိုယ်ဆဲလ်များ၏အိုမင်း၏အဓိကအချက်ဖြစ်နေဆဲဖြစ်သောစိတ်ဖိစီးမှု, ဖယ်ရှားပစ်ဖို့ရနိုင်ရန်အတွက်နောက်ဆုံးအနေနဲ့ထိုမိန်းမသည်အလေ့အကျင့်တရားအားထုတ်ရန်။
သကြားစားသုံးခြင်း၏အလေ့အထစွန့်ခွာသာခန္ဓာကိုယ်များအတွက်အကျိုးရှိသောဖြစ်နှင့်ပိုပြီးသင်ပိုပြီးသင်ငါတို့အနိုင်ယူလို့မရဘူးတဲ့မှီခိုအတွက်ပိုပြီး add ချင်ယူနိုင်ပါတယ်။
အချိုရည်များနှင့်သစ်သီးဖျော်ရည်၏စားသုံးမှုအရည်ကယ်လိုရီတိုးလာစားသုံးမှုစေပါတယ်။ Fructose ငတ်မွတ်ခေါင်းပါးမှုနှင့်စားရန်နှင့်ငတ်မွတ်ခေါင်းပါးမှုကိုထိန်းညှိပေးသောဟော်မုန်း "leptin" ကိုခုခံဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်ဆန္ဒတိုးပွားစေပါသည်။ တစ်ဦး လေ့လာ ဒီဦးတည်ချက်အတွက်တီထွင်ခဲ့သည်နှင့်အပျော့သောက်စားသုံးမှုကလေးများနှင့်လူကြီးများအတွက်ကိုယ်အလေးချိန်ကိုအားပေးအားမြှောက်ကြောင်းပြသခဲ့သည်။
တစ်ဦးနှင့်အညီ လေ့လာ NCBI အပေါ်ထုတ်ဝေခဲ့သည်, ဆက်ပြောသည်သကြားတိုးပွားလာစားသုံးမှုတိုးပွားလာအန္တရာယ်ဆက်စပ်မည်ဖြစ်ကြောင်း နှလုံးရောဂါ ကြောင်းသေဆုံးမှုသွေးဆောင်နိုင်ဘူး။
သကြားမြင့်မားတစ်ဦးကအစားအစာဝက်ခြံထဲမှာတစ်ဦးတိုးနှင့်ဆက်စပ်ခဲ့သည်။ အမှန်စင်စစ် sugary အစားအစာများကိုသွေးထဲမှာသကြားဓာတ်အဆင့်ဆင့်အတွက်မဆိုတိုးနှင့်ဝက်ခြံ၏အသွင်အပြင်မြှင့်တင်ရန်ကြောင်းအန်ဒရိုဂျင်နှင့်ရောင်ရမ်းခြင်းတစ်ခုတိုးလာလျှို့ဝှက်ချက်မှထမြောက်။ ထို့အပြင်တစ်ဦး လေ့လာ ဝက်ခြံလျှော့ချအပေါ်တစ်ဦး hypoglycemic အစားအစာ၏အကျိုးသက်ရောက်မှုသရုပ်ပြခဲ့သည်။
တစ်ဦးနှင့်အညီ လေ့လာသကြားမြင့်မားတစ်ဦးကအစားအစာဆီးချိုရောဂါဖွံ့ဖြိုးဆဲမှုအန္တရာယ်ကိုတိုးပွားစေနိုင်ပါတယ်။ Sugary အချိုရည်နှင့်သစ်သီးဖျော်ရည်ဒီအန္တရာယ်တိုးမြှင့်ဖို့အများဆုံးဖြစ်နိုင်ခြေရှိပါတယ်။
ဒါဟာစဉ်အတွင်းသက်သေပြခဲ့ပါတယ် လေ့လာ သကြားဓာတ်ကြောင့်အလွန်အကျွံစားသုံးမှုအားလုံးကင်ဆာကျိတ်များ၏အကြောင်းကို 20% တာဝန်ရှိသည်သူ့ဟာသူဖြစ်သည့်အဝလွန်ခြင်း, မြှင့်တင်ရန်လိမ့်မည်။
တစ်ဦးကသကြားဓာတ်ကြွယ်ဝတဲ့အစားအစာအရေးအကြောင်းတွေနဲ့အိုမင်းခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်၏အသွင်အပြင်အရှိန်အဟုန်မြှင့်နိုင်ပါ။ အမှန်စင်စစ်ဘိုဟိုက်ဒရိတ်များနှင့်သကြားဓာတ်မြင့်မားစားသုံးမှု begets ထုတ်လုပ်မှုအသက်ချောကုန်စည် glycation advanced နှင့်သောအသားအရေအချိန်မတန်အိုမင်းဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ပါတယ်။
မြှားမှဖယ်ရှားရန် - သိကောင်းစရာများ